Latest and Breaking News of Kyle Jarvis,Cricket,Zimbabwe
Kyle Jarvis News
Kyle Jarvis, who played for Essex in the Second XI Championship in 2011 and first-class cricket for Central Districts in New Zealand for two years, said he planned to pursue a career in county cricket and Twenty20.
West Indies vs Zimbabwe, Dominica Test: Day 1 Statistical highlights
Shane Shillingford, Chris Gayle and Marlon Samuels stood tall for the West Indies on Day 1 of the final Test between the two countries.
2nd Test, Day 1: Shillingford proves Zimbabwe's tormentor again
In stark contrast to their parlous position however, the day started promisingly for the Zimbabweans after they were inserted by West Indies captain Darren Sammy with openers Vusi Sibanda and Tino Mawoyo putting on 42 at better than a run-a-minute before the introduction of Shannon Gabriel shifted the tide of play completely.
1st Test, Day 1: Zimbabwe's Jarvis strikes to rein in West Indies
Sunil Narine left out for first Test against Zimbabwe
There was also no place for Ramnaresh Sarwan, the veteran batsman who made a comeback to the ODI side for the series against Zimbabwe after spending more than a year on the sidelines.
West Indies sweep Zimbabwe series with 3rd ODI win
Darren Bravo aims for more after maiden ODI century
Bravo put on a batting master class which spurred the West Indies to a commanding victory over Zimbabwe in the first ODI at the national stadium on Friday.
Gayle, Sammy rested as Dwayne Bravo to lead Windies against Zimbabwe
Zimbabwe will play three ODIs against West Indies in Grenada on February 22, February 24 and February 26.
Virat Kohli, Rohit Sharma, Jasprit Bumrah Get Top Slot As BCCI Announces Annual Contracts
RR vs DC, IPL 2021: Sanju Samson Takes A One-Handed Screamer To Send Shikhar Dhawan Packing
Shams Mulani Joins Delhi Capitals As Axar Patel's Short-Term COVID-19 Replacement, Aniruddha Joshi Replaces Injured Shreyas Iyer